::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather माफियातन्त्र उखेल्न संघ नेतृत्व अनवरत लागिरहेको छ:: Rojgar Manch ::
विमल ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
शनिवार, २०७३ पुस २९ गते ००:०६
गत वर्ष असार १७ गते सम्पन्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित विमल ढकाल नेतृत्वको कार्यसमितिले आज पुस २९ गते २४ औ साधारणसभा मनाउदै छ । अध्यक्षमा निर्वाचित भएको १८ महिना पुग्दा ढकाल नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेका काम र वैदेशिक रोजगारको पछिल्लो अवस्था लगायतका विषयमा रोजगारमञ्चका लागि दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानी ः
तपाई अध्यक्षमा निर्वाचित भएको १८ महिनापछि संघको पहिलो साधारणसभा हुदैछ । यस अवधिमा तपाईको नेतृत्वको कार्यकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र व्यवसायको क्षेत्रमा कस्तो रहयो ?
हाम्रो नेतृत्व आउदा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संक्रमणकालिन अवस्थामा थियो । यही समय लागू गरिएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयले धरासायी नै बन्न पुगेको यो क्षेत्रलाई सेफ ल्याण्डिङ गर्ने जिम्मेवारी हाम्रा लागि थप चुनौतीकारुपमा खडा भएको थियो । हामीले त्यसै बेला सरकार र विभिन्न राजनैतिक दललाई यो निर्णय व्यवहारिक नभएकोले यसले दुरगामी असर पर्ने बतायौ तर उनीहरुले बुझने कोषिस गरेनन । तर, अहिले आएर यो गलत मनशायले लागू गराइएको सबैले बुझिसकेका छन् । राष्ट्र बैक र विश्व बैंकले त यसले देशकै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताउदै सरकारलाई सजकसमेत गराइसके । यसलाई परिमार्जन गर्ने सवालमा अहिले सबै पक्ष सकारात्मक भैसकेका छन् यो हाम्रो ठुलो सफलता हो । हामीलाई आशा छ अब चाडै सरकारले सकारात्मक निर्णय गर्नेछ ।
अर्को कुरा हाम्रो नेतृत्व अघि व्यवसायीबीच राजनैतिक तथा विविध कारण जुन कटुतापूर्ण सम्वन्ध थियो यसलाई हाम्रो नेतृत्वले मेटाएको छ । हामी जुन बीचारधाराबाट आएपनि व्यवसायी र व्यवसायको मुद्धामा विना भेदभाव एकमत हुदा संघ सबैको साझा संस्था रहेछ भन्ने सबैले अनुभुत गर्न पाउनु हाम्रो अर्को सफलता हो ।
यस्तै विदेशिने नेपालीलाई आर्थिक भार थप्ने प्रपञ्च रोक्न राज्यको ध्यानाकर्षण हामीले गराएका छौ । यसलाई पनि हामी छिटै पार लाउने छौ । यता राज्यबाट हामीमाथि भैरहेको उदण्डपूर्ण व्यवहार सच्चाउदै ऐन नियम अनुरुप चल्ने र व्यवसायीलाई त्रसिद बनाउने वातावरण रोक्ने काममा पनि हामी सफल रहयौ । यस्तै सरकारी निकायमा व्यवसायीका काम छिटोछरितो र सहज ढंगमा हुने गरी सहजिकरणको वातावरण सिर्जना गरेका छौ ।
निर्वाचित हुनुअघि तपाइले म निर्वाचित भएर आएपछि १ महिना भित्र व्यवसायीलाई अनुभूत गर्नेगरिको परिवर्तनको आभाष गराउछु भन्नुभएको थियो त्यो बाचा कति पुराउनुभयो त ?
म निर्वाचित हुनुअघि वैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचल शाखामा पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति लिन व्यवसायीहरुलाई कठिन अवस्था थियो । तत्कालिन कार्यालय प्रमुखको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यशैलीका कारण काम नै नभइरहेको अवस्था थियो । व्यवसायीलाई व्यवसाय नै गर्न नसक्ने स्थिती सिर्जना भएको देखेर यसैलाई फोकस गरेर मैले निर्वाचित भएर आएको एक महिनामा व्यवसायीहरुलाई अनुभूत हुने परिवर्तनको आभाष दिलाउने बाचा गरेको थिए । यसका लागि हामी निर्वाचित भएर आएलगत्तै श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर १५ दिन भित्रै कार्यालय प्रमुख परिवर्तन गरी व्यवसायीका काम छिटो, छरितो र सहज ढंगमा हुने अवस्था हामीले सिर्जना गर्न सफल पनि भयौ ।
जुन जटिल परिस्थितीमा तपाईको नेतृत्व आयो यसपछि पनि आन्दोलनमा होमिएर लाइसेन्स नै सरकारलाई बुझाउने बाटोसम्म पनि तपाईहरु पुग्नुभयो । सडकदेखि सदनसम्म वैदेशिक रोजगारीका मुद्धालाई उठाइरहदा यो १८ महिने कार्यकालमा के उपलब्धि पाउनुभयो ?
सरकार र राजनैतिक दलहरु जुनसुकै क्षेत्र तथा व्यवसायका लागि अत्यन्तै गैरजिम्मेवार रहेको पायौ । यो व्यवसायको क्षेत्रलाई अस्तव्यस्थ पार्ने र अस्थिर बनाएर त्यसबाट आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने प्रवृत्ति सरकारी निकायमा बढी देखियो । यसलाई चिर्दै हामी अघि बढने प्रयासमा निरन्तर लागिरहेका छौ ।
अर्कोतिर फ्री भिसा फ्री टिकट, बायोमेट्रिक, माइग्राम लगायतका विषय छन यसमा माइग्राम्स त हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्यो । यस्तै फ्रि भिसा फ्रि टिकट तथा सेवा शुल्कको सवालमा यो गलत निर्णय थियो र यसले व्यवसायीहरुलाई र विदेशिने नेपालीलाई असहजता पैदा गरेको छ भन्ने कुरा सरकारले बुझिसकेको अवस्था छ । यो विषयलाई पुर्नबिचार गर्न राज्यका अंगहरु लगभग सहमत भैसकेका छन अब चाडैनै यसबारे सकारात्मक निर्णय आउनेमा हामी आशावादी छौ । अरु जेजति प्रक्रियाहरु छन यसबारे निर्णय गर्ने काम सरकारको हो । हरेक ठाँउमा गएर वैदेशिक रोजगार भित्र भएको माफियाकरण, अराजकता, विकृती र चर्को शुल्क असुल्ने परिपाटीलाई हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्नेमा राज्यका अंगहरु सकारात्मक बन्नु राम्रो पक्ष हो । मलाई के लाग्छ भने यो व्यवसायको क्षेत्र एकदमै अस्तव्यस्थ भएको बेला हामी नेतृत्वमा आएका थियौ निर्वाचित भएलगत्तै व्यवसायी साथीहरुसँगै लडनुपर्ने अवस्था आयो जुन पछि उहाँहरुले बुझदै जानु पनि भयो । यसकै बीचमा पनि हामीले अस्तव्यस्थ अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउने काम गर्न सक्यौ ।
तपाईको अनुभवमा राज्यका निकाय जिम्मेवार भएनन । त्यसो भए राज्यले आफ्ना नागरिक निःशुल्क विदेशिउन भन्ने नीति ल्याउदा चाहि गैरजिम्मेवार भयो अनि पैसा लिन पाउनुपर्छ भन्ने चाहि जिम्मेवार हो त ?
होइन होइन । मैले अघिनै तपाईलाई यसको पृष्ठभूमि बताइसके नि । राज्यले मात्र होइन हामी पनि नेपाली नागरिक फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौ । तर त्यसरी पठाउन व्यवहारिक रुपमा संभव छ–छ्रैन या गन्तव्य मुलुकले मान्छन–मान्दैनन भन्ने मात्र हो । अर्को कुरा हाम्रा छिमेकि मुलुकहरुबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा गैरहेका छन त्यहाँ कामदार पठाउँने कस्तो व्यवस्था छ त्यसलाई पनि हेर्नु प¥यो नि । ति मुलुक पनि आफ्ना नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार त छैनन होला नि । त्यहाँ पनि एउटा प्रणाली छ । ति मुलुकले पनि कामदार पठाउँछन । के नेपाल मात्र कामदार पठाउँने मुलुक हो र ? तर हामीले गरेको निर्णयले विदेश जान खोज्ने युवा पनि रोकिनु भएन र न्यूनतम शुल्कमा उनीहरु जान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । संघको अध्यक्षको हैसियदले भन्दा कोही व्यवसायी पनि कामदारसँग बढि पैसा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् । तर निःशुल्क पठाउँने नाममा खरानी चाहिँदा धेरै डढाउन खोजियो ।
व्यक्तिगत र नैतिक रुपमा तपाईप्रति आम व्यवसायीले खोट लगाउने ठाँउ त छैन होला । तर, तपाईले अघि भन्नुभयो नि माफियाकरण भयो भनेर । त्यसो भए वैदेशिक रोजगारी माफियाको जालोमा फसिसक्यो या त्यो जालोबाट निकाल्न संघ असफल भयो ?
नेतृत्वलाई कम्जोर भनेर तपाई कसरी भन्नुहुन्छ । कोहीकसैसँग व्यक्तिगत फाइदा लिएर म हिडेको छैन र हिडदिन पनि । संघमा आएपछि मात्र होइन जीवनमा आजसम्म म अनुचित फाइदाका पछि दौडिन । अहिले म ५० वर्षको भए यो उमेरसम्म अनैतिक र गलत काम गरेको छैन भनेर गर्भका साथ भन्न सक्छु । कोहि कसैले मेरा बारेमा औला उठाउछ भने म सार्वजनिक ठाँउमा बहस गर्न तयार छु । मलाई निर्वाचित गराएर पठाउने व्यवसायीको गरिमा गिराउने काम मबाट कदापी हुँदैन । तर, एउटा कुरा के हो भने माफियाहरु यति बलिया हुदारहेछन कि सारा निकायनै उनीहरुको पकडमा र आडमा चल्ने हुदोरहेछ । तर आज यिनै माफियाका कारण नेपाली जनता लुटिएका हुन भन्ने सारा जनताले थाहा पाए नि । यिनलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याल्न म अनवरत लागिरहेको छु । म तपाईलाई एउटै उदाहरण दिन्छु । यो माइग्राम्स भन्ने अवैधानिक हो यसलाई तत्काल रोकेर त्यसले लिएको पैसा समेत पिर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको आज दशदिन भन्दा बढि भैसक्यो तर गृहले यसलाई सुनेको नसुन्यै गरेर बसेको छ ।यहिबाट पनि बुझन सकिन्छ यि माफियाहरुको पहुँच कहाँ–कहाँ सम्म छ भनेर । तर मैले हार खाएको छैन । म अनवरत रुपमा यि कामदार लुटने संस्थाका विरुद्ध लडिरहन्छु ।
१८ महिना त यसरी नै वित्यो । बाँकी ६ महिना छ यसलाई पनि यसरी नै बित्न दिने कि आम व्यवसायीले महसुस गर्नेगरी केहि काम पनि गरेर देखाउने ?
पहिलो कुरा हिजोसम्म आम नागरिक, राज्यका निकाय, राजनैतिक दल सबैले फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय सही छ यसको विरोध गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु गलत हुन भन्ने थियो । तर आज त सबैले बुझे नि । यो निर्णय लगाउनुको कारण र यसले पारेको प्रभाव बारे सबैले बुझे । यो बुझाउन सक्नु पनि ठुलो उपलब्धी हो । हो, म एकदमै संक्रमणकालमा नेतृत्वमा पुगेको थिए । तर अनेक बाधा, व्यवधान भएपनि आम व्यवसायीको मर्म विपरित मैले कोहीकसैसँग सम्झौता गरेको छैन र गर्ने पनि छैन । तर मलाई विश्वास छ आम व्यवसायीलाई अनुभुत हुनेगरि केही निर्णय चाँडै हुन्छ ।
छोटो समय बाकि छ । यो अवधिमा केहि गर्न सक्छु भन्ने साहस छ ?
हो, अब समय थोरै छ । तर, अझ पनि केहि गर्न सक्छु भन्ने साहस र आत्मविश्वास मसँग छ । म अनवरत लागिरहन्छु अन्तिम समयसम्म । र, एउटा कुरा तपाई मार्फत सबैलाई जानकारी गराउँ । मेरा विरुद्धमा भ्रामक प्रचार गराएर, प्रहरी प्रशासनको आडमा मेरो कार्यालयमा छापा मार्न लगाएर, केहि पत्रपत्रिकालाई प्रयोग गरेर मेरो चरित्रहत्या गराउने प्रयास गर्दैमा विमल ढकाल किमार्थ बिचलित हुदैन । मलाई हतोत्साहित गराएर समय खेर नफाल्न पनि म ति मित्रहरुलाई आग्रह गर्दछु ।
आज साधारणसभा छ, के भन्नुहुन्छ आम व्यवसायीलाई ?
मैले अघि नै धेरै कुरा बताइसकेको छु । तिनै कुरा आम व्यवसायीलाई पनि भन्छु । जे भएपनि व्यवसायीहरुको छाता संगठन संघको अस्थित्व मजबुद हुदै गएको छ र आजको सन्दर्भमा व्यवसायी एक्यावद्धता चाहिन्छ भन्ने सबैलाई महसुस भएको छ । यो नै ठुलो उपलब्धी हो ।